gụọ Duckula | cha cha UK
Play Ugbu a New egwuregwu only.Maximum Nchigharị £ 20.Selected Ohere mepere Only.Sms nkwado Required.No nkwụnye ego Required.100x Wagering T si&C si
Duckula bụ otu n'ime Ịkwụ ụgwọ site Phone Ebe E Si Nweta Ohere mepere banyere vampires na ghouls. Nke a online oghere dabeere na-ewu ewu na eserese na-atọ site na afọ n'afo 1980 nke a yiri aha. Ntụziaka mere ka a mobile oghere version egwuregwu na-mgbe niile na-aga. Gụọ ihe ndị na review n'okpuru mara ihe.
Na mma nke a na-Ṅaa site Phone Ebe E Si Nweta Ohere mepere
Nke a mobile oghere iji nye online-agba chaa chaa na ụfọdụ ruo n'ókè nke na mma. Ị nwere ike igwu ọ bụla mobile ngwaọrụ dị. Player na iOS na gam akporo os nwere ike igwu a Ịkwụ ụgwọ site Phone Ebe E Si Nweta Ohere mepere.
Ego na na-mere site na iji ekwentị gị Ebe e si nweta naanị. Otú ọ dị, i nwere ike ịdọrọ site na nke a pụtara. Na nke a na usoro ị pụrụ ime ka ngwa ngwa ego. Ọ dịghị mkpa na-eme ego ego ma ọ bụ na-eji gị n'aka / Debit kaadị.
Ịghọta a Mobile Duckula oghere
Nke a oghere nwere 40 ofu paylines, 5 esi anwụde na 3 ahịrị. Ọ bụrụ na ị bụ maara na eserese na-atọ, mgbe ahụ ị ga-hoo haa na-aghọta backdrop idaha. Ị nwere a decrepit nnukwu ụlọ na bụ na n'ebe dịtụ anya site na a egwu eli. The-esi anwụde na-setịpụrụ na a okuteili na akwuru na ahihia ya n'ebe e liri.
Ị na-mgbe kaadị nnọchianya nke A, J, K, Q, 9 na 10 na a Ịkwụ ụgwọ site Phone Ebe E Si Nweta Ohere mepere. Ndị ọzọ na akara na-agụnye decrepit nnukwu ụlọ, a uwe nke ogwe aka, a ụsụ, a elekere na a nnukwu ngwa.
Ego Atụmatụ Na a Ṅaa site Phone Ebe E Si Nweta Ohere mepere
I kwesịrị ịma na unu nwere a Wild na daashi na akara ke a oghere. The Wild bụ a Eto na Heart icon mgbe i nwere a eserese na-atọ bonus akara. The na-egwu egwuregwu bonus agba na nke a oghere na-arụ ọrụ site na-agụ akụkọ nke eserese na-atọ. Ha na-agụnye vampire ọbọgwụ, hapụ ohu ya nwoke aha ya bụ Igor na ya Nanny aha ya bụ Nanny. The bonus atụmatụ na-triggered mgbe ndị a na-agụ akụkọ na-egosi n'akụkụ esi anwụde dị ka ị na-egwu a online oghere.
The atọ bonus agba na-:
A Vampire Duck Wild: The Vampire Duck-eme dị ka a ọhịa gafee esi anwụde.
An Igor Mystery Symbol gburugburu: Ebe a Igor nsị kpokọtara ọgwụ oyiyi na-esi anwụde na-agbanwe ka abịa na akara.
A Nanny 3×3 Nnukwu wilds bonus feature: Nanny nsị wilds on ahịrị atọ na atọ na-esi anwụde n'otu oge.
The ekwentị n'aka ugwo bụ oké ihe a na-akpali akpali oghere. Ọ bụ ihe na mfe ọzọ ala ụzọ ego. Otú ọ dị, a oghere na-abịa na a ubé akụda 93.35% RTP.
UK Ohere mepere na cha cha Games, More Posts:
UK Ohere mepere bonuses Online – Play na Mmeri na £ 5…
cha cha UK.com | Fast Cash-Ọ Mobile cha cha | ruo…
Castle Nrụpụta II
The Ezi Wizard
UK cha cha Review Live Site Cha Cha na Mobile bonuses!
ịgba chaa chaa Commission
Ịrụ Ọrụ Dịịrị Ịgba chaa chaa Trust
Underage Ịgba chaa chaa ihe iwe
Casino.Uk.com a kwadoro site na Nektan (Gibraltar) Limited a company registered in Gibraltar. Nektan is licensed and regulated by the Gambling Commission (Number 000-039107-R-319400-013) for customers in Great Britain and licensed by the Gibraltar Government and regulated by the Gibraltar Gambling Commission (RGL no.054) for all other customers.